Ivan Rakitic oo ku soo laabtay Safka Barcelona, xilli lala Xiriirinayay Manchester City | Laacibiin & Baahin – News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs	Tuesday, January 17th, 2017	Home
Ivan Rakitic oo ku soo laabtay Safka Barcelona, xilli lala Xiriirinayay Manchester City
Jan 11, 2017 - Aragtiyood	Ivan Rakitic oo lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqo kooxda Manchester City ayaa ku soo laabtay shaxda kooxda Barcelona ee kulanka lugta labaad ee Copa del Rey ku wajaheysa kooxda Athletic Bilbao.
ninka heerka caalami ee Croatia Rakitic ayaa waxaa laga saaray safka Barcelona ee kulanka LaLiga axadii la ciyaaray kooxda Villarreal iyadoo lagu soo waramayo in ay xiiso u qabto kooxda Manchester City.
Luis Enrique ayaa beeniyay wararka sheegaya in ciyaaryahanka uu dhaqaaqayo kadib markii 1-1 ah garoonka Estadio de la Ceramica ku galeen, halka madaxweyne ku xigeenka Barcelona Jordi Mestre uu xaqiijiyay in ciyaaryahanka heshiis cusub saxiixi doono.
wararka xanta ah ayaa sheegaya in Barca iyo Rakitic ay isku dhaceen wixii ka dambeeyay markii ciyaaryahyanka khadka dhaxe laga saaray safka kooxda ee wajahay tododbaadkaan Villarreal.
Iyadoo Rakitic soo laabtay kooxda ayaa waayi doonta Andre Gomes, kaasoo ku guuldareystay inuu soo jiito taageerayaasha tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Valencia bishii July.
Luis Enrique ayaa soo xushay Jasper Cillessen oo dhaawac ku maqnaa kulamadii lasoo dhafay, halka Jordi Masip, Aleix Vidal iyo Jeremy Mathieu laga saaray Line up-ka kulankaan.